Nepali / चेरी क्रीक स्कूल्सले सामना गर्नु परिरहेको आर्थिक चुनौतीहरूका विषयमा एउटा प्रस्तुतीकरण (Budg
चेरी क्रीक स्कूल्सले सामना गर्नु परिरहेको आर्थिक चुनौतीहरूका विषयमा एउटा प्रस्तुतीकरण (Budget Video)
महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू प्रेषक चेरी क्रीक स्कूल्स
आगामी स्कूल िषषका लागग सिकाइ विकल्पहरूबारे महत्त्िपूर्ष जानकारी
Scott Message May 15 FINAL Nepali
२०२० ग्राजुएसनका बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी (Graduation)
स्कूल स्रोत अधिकारीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी (SRO)
प्रिके-१२ का लागि व्यक्ति-उपस्थित सिकाइ बारे अपडेट (In-Person Learning)
चुनाव र अवकाशका दिनहरूबारे बजेट अपडेट (Budget Furlough)
नमस्ते, म चेरी क्रीक स्कूल्स डिस्ट्रिक्टका लागि प्रमुख आर्थिक र सञ्चालन अधिकारी स्कट स्मिथ हुँ। हामीले सामना गर्नु परेका आर्थिक चुनौतीहरू तथा हाम्रा सामु रहेको बजेट चुनौतीहरूलाई हामीले कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा किन हामीलाई समुदायको सुझाव चाहिन्छ भन्ने बारे म केही मिनेट कुरा गर्न चाहन्छु।
कोभिड-१९ अघि, स्कूल वर्ष २०१९-२० मा सुपरिन्टेन्डेन्ट सिगफ्राइडले चेरी क्रीको अर्थव्यवस्था हेर्न र अघि बढ्दै गर्दा हामीले कसरी बजेट सन्तुलन गर्न सक्छौँ भनी अवसरहरूको अन्वेषण गर्न एउटा कार्य बल गठन गर्नु भएको थियो। २०१९ मा गठन गरिएको कार्य बलले अगाडि बढ्दै गर्दा कसरी हामीले कसरी बजेटलाई स्थिरता प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा धेरै सिफारिसहरू गरेको थियो। हामीले आगामी स्कूल वर्ष तर्फ जाँदै गर्दा समीकरणको एकातर्फ हाम्रो आमदानी वृद्धि गर्नका लागि विकल्पहरू खोज्ने थियो भने, समीकरणको अर्कातर्फ डिस्ट्रिक्टभरि हामीले गर्ने खर्च कटौतीहरू अन्वेषण गर्नु रहेको थियो।
निसन्देह, कोभिड-१९सँग सबै कुरा परिवर्तन भयो, र कोलोराडो राज्यको आमदानी करिब २५ प्रतिशतले अर्थात् $३.२ बिलियनले घट्यो, जसमा हाम्रो स्कूल डिस्ट्रिक्ट आश्रित रहेको छ। हाम्रा लागि, त्यो हाम्रो फन्डिङको करिब ५.५ प्रतिशतको कटौती हो वा हामी स्कूल वर्ष २०२०-२१ मा प्रवेश गर्दा वर्तमान स्कूल वर्षमा हामीले प्राप्त गरेको भन्दा $२५०० कम हो।
हामीले केही अघिदेखिका हाम्रा फन्डिङ हेऱ्यौँ भने, कोलोराडोले के-१२ स्कूलहरूलाई क्रमिक रूपमा न्यून फन्डिङ गरेको कुरा कुनै रहस्य देखिने छैन। हाम्रो २०२०-२१ स्कूल वर्षमा जाँदाखेरिको प्रक्षेपित आमदानी, हामीले २०१८-२०१९ स्कूल वर्षका लागि प्राप्त गरेको भन्दा वास्तवमै कम भएको तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसले हामी अघि बढ्दा असङ्ख्य चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्नेछ, र डा. सिगफ्रिडले स्टाफ र समुदायका लागि लेखेको पत्रमा रेखाङ्कित गरे अनुसार।
त्यसैले, हामी कसरी त्यहाँ पुग्यौँ? कोभिड अगाडि, हामीले हाम्रो सञ्चालन बजेटमा करिब $१२ मिलियनको वृद्धिको योजना गरिरहेका थियौँ। यो कोलोराडोमा हाम्रो आकारको स्कूल डिस्ट्रिक्टका लागि पर्याप्त मानक वृद्धि हो। तर वास्तविकतामा, मैले भर्खरै उल्लेख गरे अनुसार, हामीले $२५ मिलियनको कटौती झेल्नु पर्नेछ। त्यसैले, यो अबको केही महिनामा हाम्रो फन्डिङमा $३७ मिलियनको परिवर्तन हुनेछ। यस अतिरिक्त, हामीलाई आगामी वर्षका लागि अतिरिक्त कटौतीका लागि योजना गर्न भनिएको छ, जुन यस बर्ष हामीले गरेको ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ। अहिले, हामी अब उप्रान्त प्रति वर्ष अतिरिक्त ७ प्रतिशतको कटौती प्रक्षेपित गरिरहेका छौँ। यसले हाम्रो स्कूल डिस्ट्रिक्टका लागि अतिरिक्त $३३ मिलियनको कटौती गराउनेछ। त्यसैले, दुईवटा कटौतीहरूलाई सँगै राख्दा, फन्डिङमा हामीसँग करिब $५८ मिलियनको कटौती हुनेछ जुन यस आगामी स्कूलतर्फ बढ्दै गर्दा हामीले मिलेर समाधान गर्नु पर्नेछ।
हामीले बारम्बार प्राप्त गर्ने गरेको प्रश्न हो, 'प्रशासनबाट पहिल्यै कति कटौती गरिएको छ?' वा 'केन्द्रीय कार्यालयबाट कटौती कति हो?' तपाईँले यस स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले यस वर्षमा प्रवेश गर्दा केन्द्रीय विभागहरूमा १५ प्रतिशतको कटौती गरेका छौँ, र $२.४ मिलियन बचत गरेका छौँ। यस अतिरिक्त, हाम्रा खर्चहरूको स्थिरीकरणमा बजेट कार्य बलले गरेका सिफारिसहरू मध्ये एकमा केन्द्रीय कार्यालयमा नियुक्ति स्थिरता कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ जसले गर्दा रिक्त पदहरूमा नियुक्ति नलिएर रकम बचत गर्न सकियोस्। यस रणनीति मार्फत हामीले $२.६ मिलियन बचत गर्ने सिफारिस कार्य बलले गरेको छ। यी रिक्त पदहरूमा नियुक्ति नलिएर हाम्रो स्कूल डिस्ट्रिक्टले हालको मितिसम्म $३.२ मिलियन बचत गरिसकेको रिपोर्ट गर्न पाउँदा म खुसी छु। यसमा हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयबाट र हाम्रो प्रशासनबाट ३५ दरबन्दीहरूको कटौती हो। हामीले यस स्कूल वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा पहिले नै १० जना प्रशासकहरू वा कुल प्रशासकीय कार्य बलको पाँच प्रतिशत कटौती गरेका छौँ। प्रशासनलाई हेर्दा, म एउटा अर्को कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु, चेरी क्रीक अग्र श्रेणीमा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरूमा सबैभन्दा दुब्लो देखिन्छ। कोलोराडो स्कूल फाइनान्स प्रोजेक्टले गरेको एउटा स्वतन्त्र अध्ययनले देखाए अनुसार हाम्रा समकक्ष डिस्ट्रिकटहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम प्रशासकहरू र केन्द्रीय कार्यालय स्टाफ रहेका डिस्ट्रिक्ट मध्ये हामी एक हौँ र हाम्रो समग्र बजेटको १ प्रतिशतभन्दा कम सामान्य प्रशासनतर्फ जान्छ।
हामी हाम्रो आर्थिक रणनीति एउटा दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति रहेको निश्चित गर्न चाहन्छौँ, जसमा वर्षौँ र दसकौँको उत्कृष्ठताका लागि हामीले आफैँलाई स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ। र त्यही कारण हो हामीले लामो समयका लागि यो दृष्टि लिएका छौँ: आगामी वर्षहरूमा हामीले कसरी संरचनागत बजेट समस्या हल गर्छौँ र कसरी समुदायसँगै मिलेर गर्छौँ? त्यसैले हामीलाई यस सर्वेक्षणमा तपाईँहरूको सुझाव चाहिन्छ, जसले गर्दा हामीले बजेट कटौती सुरु गर्न सकौँ, यो आर्थिक रूपमा सबैभन्दा मितव्ययी तरिकाले गर्न सकौँ र जसले हामीलाई दीर्घकालीन सफलताका लागि स्थापित गर्न सकोस्।
आफ्नो सुझाव प्रदान गर्नका लागि समय लिनु भएकामा तपाईँलाई धन्यवाद र हामी यस ग्रीष्म ऋतुमा अघि बढ्दै गर्दा यस सर्वेक्षणको नतिजाको प्रतिक्षा गरिरहेका हुनेछौँ।